Bangladesh : Fampandrosoana Amin’ny Fomba Rehetra · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh : Fampandrosoana Amin'ny Fomba Rehetra
Nandika (fr) i Pascale Doresca
Voadika ny 21 Oktobra 2017 16:06 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Martsa 2007)
Anisan'ireo firenena tena be mponina manerana ny tany ny Bangladesh. Manome antontanisa mifanaraka mba hanohanana ilay fanambarana i Bideshi Blond. Amin'ny maha firenena an-dalam-pandrosoana manana loharanon-karena voafetra azy, tena sarotra ho an'i Bangladesh ny hiroso hatrany.
Mety izany no antony isian'ireo hetsika maro ho fampandrosoana ataon'ny governemanta sy ireo Fikambanana Tsy Miankina. Fa olona maro no miasa ihany koa amin'ny fomba ny rehetra mba hanampiana an'i Bangladesh hamaha ny olany. Eto izahay dia mitondra ny ezaka sasantsasany nataon'ireo mpiara-miasa sy mpikatroka mpiaro zon'olombelona manoloana ny olona rehetra araka izay fahitan'ireo mpitoraka blaogy azy.
Manoratra mikasika ny Khokon i Morris the pen, Bangla iray mpilatsaka an-tsitrapo manentana sekoly iray tafo lanitra natao ho an'ireo mahantra ary tsy mandray fanohanana ara-panjakana. Hoy i Khokon :
”Fa maninona isika no tsy maintsy hangataka? Tsy afaka mamaly ny hetahetantsika ihany ve ny tenantsika?” Matetika nanome boky sy sakafo ny olona tsara sitrapo, izay noraisina am-pankasitrahana. Misy Japoney mpanohana iray matetika tonga aty manampy anay amin'ny fampianarana. Saingy tsy orinasa miankina amin'ny fiantràna ity : mamita ny filàn'ny tenany amin'ny heriny samirery izy. Raha ny marina, maneso momba ny laharampahamen'ireo Fikambanana Tsy Miankina maro i Khokon. ”Tena aleoko tanteraka miantso ity ho NPO” (Non-For-Profit organization na Fikambanana Tsy Mitady Tombony Ara-bola). ”Fa maninona no hila fango izahay, birao misy milina fandrindràna rivotra ary Landcruiser iray?”
Manadihady amin'ny antsipirihany ny toe-javatra iainan'ny mpitarika Posiposy any Bangladesh ary mitatitra i Tom ao amin'ny Bangladesh Barta :
“‘Hita manerana ny Bangladesh ny posiposy : mameno ny làlana eo am-pitarihana mpandeha roa na telo, vata fampangatsiahana, voninkazo plastika, sakafo (velona sy maty ) ary izay zavatra rehetra afaka asisika ao amin'ilay seza kely voarakotra plastika. Hita mameno an'i Azia Atsimo sy Atsimo-Atsinanana, amin'ny endrika maro samihafa ny posiposy, fa ao Bangladesh izy ireo no tena feno mandehandeha. Feno haingony, volimbolina, lakolosy sy sary hosodokona maoske, lisy, mpilalao sarimihetsika, tigra sy sarinà tanànan'ny hoavy ireo posy sasany vaovao voizina toy ny bisikilety . Mameno ny tanàndehibe sy tanàna kely izy ireo, amin'ny maha fomba fitaterana fototra azy- 57% an'ny fivezivezena ao Bangladesh no atao amin'ny alalan'ny posiposy. 6% amin'ny Harin-karena Faobe ny fitarihana posiposy, olona 14 tapitrisa (10% an'ny mponina rehetra ) no miantehitra amin'io amin'ny fomba mivantana na tsia ho fivelomany, ary 800.000 fotsiny no isan'ny mpitarika posy ao Dhaka. Na izany aza, anisan'ny olona manana sokajy ara-sosialy ambany indrindra ny mpitarika posy.”
Mandray anjara amina tetikasa kely fisoloana vava natao mba hampitàna ny fihetsika ara-tsosialy manoloana ireo mpitarika posy ary mba hanome hery mivantana ho an'ireo mpitarika posy ireo hanam-pifandraisana amin'ireo mpandray fanapahankevitra sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny mba hitakiana ny zony—izay ny asa mendrika sy hajaina.
Mizara tantara mahavariana ao amin'ny blaoginy mikasika ireo vahoaka indizenin'i Mandi sy Koch ao Modhupur, Bangladesh ilay mpanao gazety Tasneem Khalil :
“tantaran'ny fomba fitondran'ny fanjakan'ny Bangladesh, amin'ny alalan'ny sampandraharahan'ny ala, ny iray amin'ireo foko vitsy an'isa miloko indrindra ao amin'ny firenena ho toy ny enta-mavesatra mora ariana ity. Tantaran'ny fomba hamatsian'ny Banky Aziatika ho an'ny Fampandrosoana sy ilay kambana aminy mahatsiravina, ny Banky Iraisampirenena, tetikasa fandripahana faobe amin'ny anaran'ny fampandrosoana, izay manimba tsikelikely ny alan'ny ‘sal’ ity. Tantaran'ny fomba hamarotan'ireo mpivarotra akora simika manerantany, toy ny Syngenta, Bayer, sy ACI, poizina mahafaty amin'ireo mpamboly tsy mahalala na inona na inona. Tantaran'ny fomba anaovan'ireo pasitera sy maulanas fampielezankevitra fanafihana ara-kolontsaina izay mamafa ny maha-izy azy ny mponina Mandi mihitsy aza. Tantaran'ny fomba famafazana baomba ataon'ny Tafika an'habakabak'i Bangladesh ao Modhupur, izay mampidi-doza ny fiainana ara-tontolo iainan'ilay faritra.
Dia avy eo, tantaran'ny fanoherana, ahoana ankehitriny ny fomba anoheran'ireo adivasis-n'i Mandi, izay nenjehan'ny sivilizasiona nandritra ny taonjato maromaro ary koa ny fomba fiezahany hamadika ny zava-misy, mba hahatonga firenena iray tsy miraharaha azy hihaino ny feon'izy ireo.”
Manoratra mikasika ny ezaka nataony ho fanangonana vola tamin'ny alalan'ny hetsika toy ny fampisehoana mozikaly sy ny fandraisany anjara manokana ny blaogin'ny BNWLA Hostel Appeal. Hanangana fialofana no tanjona :
”ho an'ireo tafavoaka velona tamin'ny fanararaotana, fanolanana, fanondranana, fanandevozana an-tokatrano ary fanafihana tamin'ny asidra, ary koa ireo olona miainaa miaraka amin'ny VIH sy ny SIDA ary ny zaza nariana. Izy dia… hanome tranokely fialofana, sekoly, foibe fiofanana ary kianja filalaovana. Eny am-piandohana, hanampy ny olona mba hanasitrana ny ratra ao anatina tontolo iainana azo antoka ary avy eo hanantena ny hoavy, amin'ny alalan'ny fampidirana indray ho anatin'ny fiarahamonina : fanombohana vaovao ary fahafahana iray hamerina hanarina ireo fiainana potika ho an'ireo vehivavy sy zaza miaina izany.”
Miarahaba ny tanoran'i Bangladesh i Ulysse avy amin'ny Back to Bangladesh izay mametraka fahasamihafana, na ao amin'ny ‘cricket’ na saripika. Ny olana dia manana fironana ara-tantara mankany amin'ny zokiolina sy ny lasa ny kolontsaina. Mamintina kosa anefa izy fa ”eo am-pelatanan'ny olona tsara ny hoavin'i Bangladesh”.